Inkonzo yokukhusela ngokukhawuleza - iAnebon Metal Products Co, Ltd.
I-Anebon ayiboneleli ngeenkonzo ezizenzekelayo kwimveliso esezantsi yevolumu yeemveliso, ithathela ingqalelo uyilo lweshishini olunomdla, kodwa ikwabonelela ngeenkonzo zokuqhubekeka ngokukhawuleza. Ukuba uneeprojekthi ezintsha eziphantsi kophuhliso, sinokubonelela ngokhetho lwezinto ezikhethiweyo, iinkqubo zoomatshini kunye nonyango lomphezulu. Kwaye ezinye iingcebiso, Yenza uyilo lwakho lusebenze ngakumbi, uqonde ubuchule bakho kwezoqoqosho kwaye ngokukhawuleza.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuveliswa okukhawulezileyo kwahlukile ekuboniseni, kuba kufuna inqanaba eliphezulu lokuqwalaselwa komgangatho, ukuphindeka, kunye neemfuno ezingqongqo ngakumbi zezicelo zemveliso. Kule meko i-Anebon yenye yezimbalwa kushishino oluyinyani olukhawulezayo lokuvelisa.
Sigxininisa kwimveliso esemgangathweni ophezulu, enexabiso eliphantsi. Ngoluhlu lweetekhnoloji kunye neenkonzo, siyi-shop-stop efanelekileyo kuzo zonke iimfuno zakho zokubonisa.
Iiprototypes ziluncedo kakhulu kuphuculo loyilo, kwaye uninzi lwabathengi bethu kufuneka bavelise ngokukhawuleza izinto ezibonakalayo ukuze baqinisekise uyilo okanye bafumane amathuba okuthengisa exeshana.
Njengamalungu amaninzi aveliswe kwiivenkile ze prototype kwezi ntsuku zifuna ukusetyenzwa ngamacala amahlanu, iinkonzo zokugaya i-5-axis kunye neenkonzo zokwenza izinto zikwimfuno ephezulu yezicelo ezahlukeneyo kuluhlu olubanzi lwamashishini kubandakanya ishishini le-aerospace, ishishini le-steamer, imoto evuselela imveliso kunye namandla amashishini okuvelisa. Izibonelelo machining zibandakanya umgangatho ophezulu umphezulu entanjeni, ukubeka ngokuchanekileyo, kunye nexesha elifutshane lokuhola ngelixa usenza umda omkhulu kumathuba amatsha eshishini.
Kutheni ukhetha i-Anebon ngokukhawulezisa ngokukhawuleza?
Ukuhanjiswa okukhawulezayo: Uhlobo olukhawulezayo lwe-1-7 yeentsuku zokuhanjiswa kwehlabathi, ukuveliswa kwemveliso esezantsi yevolumu ukuhanjiswa kweentsuku ezi-3-15;
Iingcebiso ezinengqiqo: Cebisa iingcebiso ezifanelekileyo kunye noqoqosho kuwe kwizinto, ubuchule bokuqhubekeka, kunye nonyango lomphezulu;
Indibano yasimahla: Iprojekthi nganye iyavavanywa kwaye idityaniswe ngaphambi kokuhanjiswa ukuvumela abathengi ukuba bahlangane ngokulula kwaye baphephe inkcitho yexesha elibangelwa kukusebenza kwakhona.
Uhlaziyo lwenkqubo: Sinabasebenzi aba-1 ukuya kwabali-1 kwintengiso yokuhlaziya inkqubela phambili kunye nokunxibelelana nemiba enxulumene nayo kwi-intanethi.
Emva kweNtengiso yeNkonzo: Abathengi bafumana ingxelo evela kwimveliso kwaye siya kubonelela ngezisombululo ngaphakathi kweeyure eziyi-8.